Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Khataraha safarka ee 2022: Waqtiga ugu wanaagsan ee ballansashada duulimaadyada iyo hoteellada
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • saaciday inay • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Khataraha safarka ee 2022: Waqtiga ugu wanaagsan ee lagu ballansan karo duulimaadyada iyo hoteellada
Maaddaama aan la saadaalin karin ee la xiriirta masiibada ayaa weli jirta, dabacsanaanta ayaa sii ahaan doonta mudnaanta socdaalayaasha gudaha iyo kuwa caalamiga ah.
Maalinta ugu fiican ee usbuuca si loo ballansado duulimaad waa Axad, maahan Jimce.
In kasta oo sicirka hoyga gudaha uu hoos u dhacay 2020, sicirka ayaa si tartiib tartiib ah u kordhay sanadkii la soo dhaafay.
Iyada oo socdaalayaashu sii wadaan qorshaynta safarada waddooyinka, warshaduhu waxay tilmaamayaan maalinta ugu fiican ee la ballansan karo kiraynta baabuurka waa Khamiista safarada gudaha.
Warbixin cusub oo muujineysa hagardaamooyinka socdaalka ee sanadkaan, oo ay kujirto waqtiga ugu wanaagsan ee lagu ballansan karo duulimaadka duulimaadka, goorta la safrayo iyo talooyin kale oo lagu caawinayo dadka socotada ah inay maraan jadwalka fasaxa 2022, ayaa maanta la siidaayay.
18 bilood ka dib socotada caalamiga ah ayaa bilaabaya inay dib u soo baxaan, oo diyaar u ah inay sahamiyaan adduunka iyo khibradaha isbedelaya nolosha ayaa mar kale keeni kara. Sida lagu sheegay warbixinta, afartii qofba mid ka mid ah dadka safarka ah ee doonaya talooyinka kaydka iyo boqolkiiba 45 ayaa tilmaamaya inay diyaar u yihiin inay dabacsanaadaan qorshayaashooda socdaalka si ay lacag u badbaadiyaan.
Diiwaangelinta duullimaadyada duulimaadyada ee 2022
Iyada oo ku saleysan xogta laga keenay ARC, qiimaha tigidhada celceliska (ATPs) horraantii 2021 ayaa weli ka sarreeyey sanadihii hore; si kastaba ha ahaatee, imaan Abriil waxaa jiray hoos u dhac. ATPs ee duullimaadyada caalamiga ah iyo kuwa gudahaba tan iyo markii dambe si isdaba joog ah ayay u kordhayeen laakiin weli waxay celcelis ahaan ku dhow yihiin 25 boqolkiiba marka la barbar dhigo 2019.
Daaqada Goosashada Ugu Fiican
Qiimaha duulimaadyada gudaha ayaa sida caadiga ah bilaaba inay kordhaan 35 maalmood kahor bixitaanka, halka qiimaha duullimaadyada caalamiga ah ay bilaabaan inay kordhaan 28 maalmood kahor. Meesha macaan ee lagu ballansan karo duulimaad gudaha ah waxay u dhexeysaa 28 - 49 maalmood kahor, halka duullimaadyada caalamiga ah la sii ballansan doono saddex illaa afar bilood kahor qiimaha ugu hooseeya.
Maalinta ku habboon toddobaadka si aad u ballansato
Maalinta ku habboon in la ballansado duulimaad waa Axad, ma aha Jimce. Duulimaadyada gudaha tani waxay badbaadin kartaa dadka socotada ah ilaa 15 boqolkiiba iyo duullimaadyada caalamiga ah keydintu waxay ku dhowdahay 10 boqolkiiba.
Maalinta ku habboon toddobaadka in la safro
Maalinta ugu fiican ee la bilaabi karo safarka gudaha waa Jimcaha ma aha Isniinta, halkaas oo dadka socotada ah ay kaydin karaan ilaa 25 boqolkiiba.
Duulimaadyada caalamiga ah, bilow safarka Sabtida, ma aha Talaadada si aad u badbaadiso ku dhawaad ​​10 boqolkiiba.
Bisha ugu fiican ee safarka
Dadka socotada ah ee qorshaynaya safarradooda 2022 waxay sidoo kale furi karaan keydin aad u badan iyagoo dabacsanaan leh iyo xulashada bisha saxda ah ee safarka:
Bisha ugu habboon in la baxo waa Janaayo ilaa Diisambar. Duulimaadyada gudaha tani waxay badbaadin kartaa socotada ilaa 15 boqolkiiba iyo ku dhawaad ​​30 boqolkiiba socdaallada caalamiga ah.